”အညံ့ဝင်နေသူများ ကုသိုလ်ကံကို မြင့်တက်စေရန် မကြာခဏလုပ်ပေးသင့်သော လိုအင်ပြည့်ရာ – ဓါတ်ကြီးလေးပါးယတြာ” - Mega Wave
ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံကို မြင့်တက်စေရန် အလိုငှာနှင့် မကောင်းတဲ့အကုသိုလ် ကံကို နည်းပါးပယ်ပျောက်စေရန် အလို့ငှာ ဘုရား ယတြာကို မကြာခဏလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကန်တော့ခြင်း။
၂။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဆွမ်းတော်ကပ်ခြင်း။
၃။ ရေလမ်း၊ ပန်းလမ်း၊ အလင်းလမ်းတို့ဖြင့် မဟာပဌာန်း ပူဇော်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုိအင်ပြည့်ရာ – ဓါတ်ကြီးလေးပါးယတြာ
၀ါယောဓာတ်က အပါး (၆)ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ရမည့်နေ့. မိမိ မွေးရက် နံနက်အာရုံတက်ချိန်
ပြင်ဆင်ပုံ……. ခုံတစ်လုံးပေါ်မှာ စာပွဲခင်း ဖြူဖြူသန့်သန့် ခင်းရမယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ခုံပေါ်မှာ အောက်ပါ ပစ္စည်းတွေ ပြင်ဆင်ထားရမယ်။
၁။ အရုဏ်မတက်မီ ဆွမ်းတော်ပွဲ (၂၀ )တွင် ဆွမ်းနှင့်အတူ သစ်သီး (၉) မျိုး တစ်စိ်ိတ်စီ သို့မဟုတ် ယို(၉) မျိုးနှင့် ပြင်ပါ။
၂။ သောက်တော်ရေ (၁၂) ခွက်
၃။ ဖန်ခွက်သို့မဟုတ် ပန်းအိုးဖြင့် ယပ် (၆) ခု(ပန်းလှူလိုပါက ထည့်နိုင်သည်။)
၄။ အလင်းမီးတိုင် (၄)တိုင်
လှူဒါန်းစဉ်တွင် ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရန် အဆင့်ဆင့် အလှူမတိုင်ခင်တစ်ရက် ညတွင် မြတ်စွာဘုရား အမှူးရှိသော သံဃာတော်တို့နှင့် (၃၁)ဘုံသားတို့အား ကြိုတင်ပင့်ဖိတ်ရပါမည်။
” ဘုန်းတော် အနန္တ၊ ဉာဏ်တော် အနန္တ၊ကံတော် အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေမိုး ဖြန်းဖြန်းကျိုးမျှ တန်ခိုးတော် အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သော သံ၊ ဂုံ၊ ပ၊ မ (ကကုသန်၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ)
ဗုဒ္ဓ လေးဆူ အောင်တော်မူ မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်/မတို့သည် မနက်ဖြန်မနက်
အာရုဏ်တက်သော အခါတွင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်တကွ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ ရှင်မဟာကဿဖ၊ ရှင်ပိဏ္ဍောလ၊ ရှင်သိဝလိ၊ ရှင်ပိလိန္ဒဝစ္ဆ၊ ရှင်ဥပဂုတ္တ လေးပါး
(ရှင်ဥပဂုတ္တ၊ ရှင်သာရစက္က၊ ရှင်သကောသက္ကာ၊ ရှင်မေဒရ) အစရှိသော လက်ဝဲရံ လက်ယျာရံ အဂ္ဂသာဝကာ မဟာသာဝကာ တပည့်သံဃာတော်မြတ်တို့အား ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်း အလှူဒါန အဝဝတို့ကို ကပ်လှူ ပူဇော်လိုပါသောကြောင့်
တပည့်တော်တို့အား ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သောအားဖြင့် တပည့်တော်တို့၏အိမ်ဂေဟာသို့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်း အလှူခံတော်မူရန်နှင့် ဆွမ်းဘုန်းပေး သုံးဆောင်တော်မူပါရန်
တပည့်သံဃာတော်မြတ်များနှင့်တကွကြွတော်မူပါမည့်အကြောင်း ရိုသေမြတ်နိုး လက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးပင့်လျှောက်ပါ၏ အရှင်မြတ်ကြီးဘုရား။ ”
” အစမထင်သော သံသရာ ဘဝ အဆက်ဆက်က တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင် မိဘဖိုးဖွား ဆရာသမားများအား အစထား၍
ဣဒ္ဓိရှင်၊ သိဒ္ဓိရှင်၊ မဟိဒ္ဓိရှင် ဘုန်းရှင်ကံရှင်များဖြစ်ကြသော အရိယာဝိဇ္ဇာတို့မှ အစပြုသော အင်းဝိဇ္ဇာ၊ ဆေးဝိဇ္ဇာ၊ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ၊ သံဝိဇ္ဇာ၊ မန္တာန်ဝိဇ္ဇာနှင့်
ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာများ……သိကြားဗြဟ္မာ၊ ပဇာပတိ၊ မာတလိ၊ ဝိသကြုံ၊ မဟာဓတရဠ၊ ဝိရုဠက၊ ဝိရုပက္ခ၊ ကုဝေရ၊ အာကာသစိုး၊ ဘုမ္မစိုး
၊ (တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး၊သောကြာ စနေ ရာဟု ကိတ်)
ဂြိုလ်မင်း အပေါင်းတို့နှင့် တန်ခိုးထင်ရှား နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ကုမ္ဘဏ်၊ ယက္ခ၊ ဂန္ဓဗ္ဗနှင့် (၃၇)မင်း၊ အတွင်းနတ်၊ အပြင်နတ် မလစ်မလပ် တိုင်းခေတ် စကြာဝဠာ အသင်္ချေ၊အသချာင်္ ရေသော်များလှ အနန္တ၌ နေကြ ထင်ရှား နတ်ဝိဇ္ဇာများတို့……
အရိယာ ဂိုဏ်းဝင် ထေရ်အရှင်တို့…..သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ဆရာတော်အပေါင်းတို့……သာသနာ့ဂိုဏ်းဝင် သိုက်နန်းရှင်အပေါင်းတို့…..
ရေလမိုင်း ကုန်းလမိုင်း ကောင်းကင်လမိုင်းတို့……လက်ဝဲကိုးသိန်း လက်ယာကိုးသိန်း အတိုင်းမသိအကြွင်းအကျန်မရှိ ကျွန်ုပ်တို့ကဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
မနက်ြဖန်နံနက် အာရုဏ်တက်သောအခါ ကကုသန်၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ လေးဆူ အောင်တော်မူ မြတ်စွာဘုရားတို့နှင့် တကွ တပည့် သံဃာတော်မြတ်များအား ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူဒါနကိုကပ်လှူ ပူဇော်ပါမည်။
၎င်းအလှူပွဲကို အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ ယှဉ်တွဲ၍ပါရမီဖြည့်ဆည်းလှူဒါန်းကြရအောင် အားခဲ၍လာကြပါကုန်လော့။ ရတနာသုံးပါး အားထားကြည်ညိုရန် လာလှည့်ကြပါကုန်လော့။
သရဏဂုံသီလ ခံယူဆောက်တည်ရန် လာကြပါကုန်လော့။ ပရိတ် မေတ္တာဘာဝနာ ရိုသေစွာနာကြားရန် လာကြပါကုန်လော့။
သာသနာ့ အောင်ဘိသိက်ပွဲ ဆင်နွှဲလှည့်ကြပါကုန်လော့။ သာသနာ့အောင်စခန်း နိဗ္ဗာန်လမ်း ဖွင့်လှစ်ကြပါကုန်လော့။
အမျိုးဘာသာသာသနာ ဘယာဝေး၍ အေးစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရန် လာကြပါကုန်လော့။ ” ဟု တစ်ခေါက် (သို့) သုံးခေါက် ဖိတ်ကြားပါ။
အလှူဒါနအစီအစဉ် မနက် အာရုံမတက်ခင် အိပ်ယာမှထ၍ မျက်နှာသစ်၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်၍ သန့််ရှင်းသောအဝတ်များလဲပြီးနောက်လှူဖွယ်များပြင်ဆင်ပါ။ဆွမ်း ရေချမ်းမှလွဲ၍ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ညကတည်းက ကြိုတင် ခင်းထား ပြင်ထားနိုင်ပါသည်။
ဖယောင်းတိုင် လေးတိုင်ကို ထွန်းပါ။ ပြီးတော့ မြတ်ဘုရားနဲ့ ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ်တွေကို ပင်ဖိတ်လျှောက် ထားပါ။ ပြီးတော့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်းကို ရိုသေစွာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါ။
သီလဆောက်တည်ပါ။ မေတ္တာသုတ်တော်၊ မဟာပဌာန်းအကျယ်၊ မဟာသမယသုတ်တော် တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ နောက် မိမိတို့ မိသားစု ဖြစ်ချင်တာတွေကို ထိုင်ပြီး ကျကျနန ဆုတောင်းပါ။ ဖယောင်းတိုင် မီးညိမ်းရင် စွန့်လို့ရပါပြီ။
စွန့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအတိုင်းစွန့်လ်ို့ မရဘူး။ စာရွက် အဖြူတစ်ရွက်ပေါ်မှာ ကြီးလေးကြီးစမကို ပုံပါအတိုင်း ရေးပါ။ ပြီးရင် မိမိ၏ အိမ်ရှေ့ ပြောင်ပြောင်တွင် ကြီးလေးကြီးရေးထားသော စာရွက်ပေါ်တွင် စွန့်ရမည်။
စွန့်သောအခါတွင် ရေ ၁၂-ခွက်ကိုလည်း ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် လောင်းချပြီး စွန့်ရမည်။ ယပ် ၆-ချောင်းကိုလည်း ဘေးတွင် စိုက်ထားရမည်။ ပြီးရင် မီးမှာ ကျက်စားသော သတ္တ၀ါ၊
လေမှာ ကျက်စားသော သတ္တ၀ါ၊ မြေမှာကျက်စားသော သတ္တ၀ါ၊ ရေမှာ ကျက်စားသော သတ္တ၀ါများ အားလုံး ၀လင်အောင် သုံးဆောင်ပြီး လိုရာအရပ်ကို သွားကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကြပါလို့ ရွတ်ဆို၍ စွန့်ရမည်။
အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုးတက်အောင်မြင်စေပါတယ်။ ပြောစကားဆိုစကားကို အောင်မြင်စေတယ်။ စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ပျှော်ရွှင်စေတေယ်။
ဒါကြောင့်် ယတြာချေခြင်းကို ၀ါသနာပါ ယုံကြည်ကြသူများအနေနှင့် မိမိတို့ မိသားစု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဤဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာကို မကြာခဏ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကောငျးတဲ့ ကုသိုလျကံကို မွငျ့တကျစရေနျ အလိုငှာနှငျ့ မကောငျးတဲ့အကုသိုလျ ကံကို နညျးပါးပယျပြောကျစရေနျ အလို့ငှာ ဘုရား ယတွာကို မကွာခဏလုပျပေးဖွဈပါတယျ။
၁။ ခငျပှနျးကွီး (၁၀) ပါးကနျတော့ခွငျး။
၂။ ဓာတျကွီးလေးပါး ဆှမျးတျောကပျခွငျး။
၃။ ရလေမျး၊ ပနျးလမျး၊ အလငျးလမျးတို့ဖွငျ့ မဟာပဌာနျး ပူဇျောခွငျးတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
လိုအငျပွညျ့ရာ – ဓါတျကွီးလေးပါးယတွာ
ဝါယောဓာတျက အပါး (၆)ပါး တို့ဖွဈပါသညျ။
လုပျရမညျ့နေ့. မိမိ မှေးရကျ နံနကျအာရုံတကျခြိနျ
ပွငျဆငျပုံ……. ခုံတဈလုံးပျေါမှာ စာပှဲခငျး ဖွူဖွူသနျ့သနျ့ ခငျးရမယျ။ ပွီးတော့ အဲဒီ ခုံပျေါမှာ အောကျပါ ပစ်စညျးတှေ ပွငျဆငျထားရမယျ။
၁။ အရုဏျမတကျမီ ဆှမျးတျောပှဲ (၂၀ )တှငျ ဆှမျးနှငျ့အတူ သဈသီး (၉) မြိုး တဈစိတျစီ သို့မဟုတျ ယို(၉) မြိုးနှငျ့ ပွငျပါ။
၂။ သောကျတျောရေ (၁၂) ခှကျ
၃။ ဖနျခှကျသို့မဟုတျ ပနျးအိုးဖွငျ့ ယပျ (၆) ခု(ပနျးလှူလိုပါက ထညျ့နိုငျသညျ။)
၄။ အလငျးမီးတိုငျ (၄)တိုငျ
လှူဒါနျးစဉျတှငျ ရှတျဖတျ ပူဇျောရနျ အဆငျ့ဆငျ့ အလှူမတိုငျခငျတဈရကျ ညတှငျ မွတျစှာဘုရား အမှူးရှိသော သံဃာတျောတို့နှငျ့ (၃၁)ဘုံသားတို့အား ကွိုတငျပငျ့ဖိတျရပါမညျ။
” ဘုနျးတျော အနန်တ၊ ဉာဏျတျော အနန်တ၊ကံတျော အနန်တ စကွာဝဠာ ကမ်ဘာမွမေိုး ဖွနျးဖွနျးကြိုးမြှ တနျခိုးတျော အနန်တတို့နှငျ့ ပွညျ့စုံတျောမူကွကုနျသော သံ၊ ဂုံ၊ ပ၊ မ (ကကုသနျ၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ)
ဗုဒ်ဓ လေးဆူ အောငျတျောမူ မွတျစှာဘုရား တပညျ့တျော/မတို့သညျ မနကျဖွနျမနကျ
အာရုဏျတကျသော အခါတှငျ ရှငျတျောမွတျဘုရားနှငျ့တကှ ရှငျသာရိပုတ်တရာ၊ ရှငျမဟာမောဂ်ဂလာနျ၊ ရှငျမဟာကဿဖ၊ ရှငျပိဏ်ဍောလ၊ ရှငျသိဝလိ၊ ရှငျပိလိန်ဒဝစ်ဆ၊ ရှငျဥပဂုတ်တ လေးပါး
(ရှငျဥပဂုတ်တ၊ ရှငျသာရစက်က၊ ရှငျသကောသက်ကာ၊ ရှငျမဒေရ) အစရှိသော လကျဝဲရံ လကျယြာရံ အဂ်ဂသာဝကာ မဟာသာဝကာ တပညျ့သံဃာတျောမွတျတို့အား ဓာတျကွီးလေးပါးဆှမျး အလှူဒါန အဝဝတို့ကို ကပျလှူ ပူဇျောလိုပါသောကွောငျ့
တပညျ့တျောတို့အား ခြီးမွှောကျထောကျပံ့သောအားဖွငျ့ တပညျ့တျောတို့၏အိမျဂဟောသို့ ဓာတျကွီးလေးပါးဆှမျး အလှူခံတျောမူရနျနှငျ့ ဆှမျးဘုနျးပေး သုံးဆောငျတျောမူပါရနျ
တပညျ့သံဃာတျောမွတျမြားနှငျ့တကှကွှတျောမူပါမညျ့အကွောငျး ရိုသမွေတျနိုး လကျဆုံမိုး၍ရှိခိုးပငျ့လြှောကျပါ၏ အရှငျမွတျကွီးဘုရား။ ”
” အစမထငျသော သံသရာ ဘဝ အဆကျဆကျက တျောစပျခဲ့ဖူးသော အနန်တဂိုဏျးဝငျ ကြေးဇူးရှငျ မိဘဖိုးဖှား ဆရာသမားမြားအား အစထား၍
ဣဒ်ဓိရှငျ၊ သိဒ်ဓိရှငျ၊ မဟိဒ်ဓိရှငျ ဘုနျးရှငျကံရှငျမြားဖွဈကွသော အရိယာဝိဇ်ဇာတို့မှ အစပွုသော အငျးဝိဇ်ဇာ၊ ဆေးဝိဇ်ဇာ၊ ပွဒါးဝိဇ်ဇာ၊ သံဝိဇ်ဇာ၊ မန်တာနျဝိဇ်ဇာနှငျ့
ဂန်ဓာရီဝိဇ်ဇာမြား……သိကွားဗွဟ်မာ၊ ပဇာပတိ၊ မာတလိ၊ ဝိသကွုံ၊ မဟာဓတရဠ၊ ဝိရုဠက၊ ဝိရုပက်ခ၊ ကုဝရေ၊ အာကာသစိုး၊ ဘုမ်မစိုး
၊ (တနင်ျဂနှေ တနင်ျလာ အင်ျဂါ ဗုဒ်ဓဟူး ကွာသပတေး၊သောကွာ စနေ ရာဟု ကိတျ)
ဂွိုလျမငျး အပေါငျးတို့နှငျ့ တနျခိုးထငျရှား နဂါး၊ ဂဠုနျ၊ ကုမ်ဘဏျ၊ ယက်ခ၊ ဂန်ဓဗ်ဗနှငျ့(၃၇)မငျး၊ အတှငျးနတျ၊ အပွငျနတျ မလဈမလပျ တိုငျးခတျေ စကွာဝဠာ အသင်ျခြေ၊အသခြာင်္ ရသေျောမြားလှ အနန်တ၌ နကွေ ထငျရှား နတျဝိဇ်ဇာမြားတို့……
အရိယာ ဂိုဏျးဝငျ ထရျေအရှငျတို့…..သာသနာပွု ပုဂ်ဂိုလျကြျော ဆရာတျောအပေါငျးတို့……သာသနာ့ဂိုဏျးဝငျ သိုကျနနျးရှငျအပေါငျးတို့…..
ရလေမိုငျး ကုနျးလမိုငျး ကောငျးကငျလမိုငျးတို့……လကျဝဲကိုးသိနျး လကျယာကိုးသိနျး အတိုငျးမသိအကွှငျးအကနျြမရှိ ကြှနျုပျတို့ကဖိတျကွားအပျပါသညျ။
မနွကျဖနျနံနကျ အာရုဏျတကျသောအခါ ကကုသနျ၊ ကောဏဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ ဗုဒ်ဓ လေးဆူ အောငျတျောမူ မွတျစှာဘုရားတို့နှငျ့ တကှ တပညျ့ သံဃာတျောမွတျမြားအား ဓာတျကွီးလေးပါး အလှူဒါနကိုကပျလှူ ပူဇျောပါမညျ။
၎င်းငျးအလှူပှဲကို အကြှနျုပျတို့နှငျ့ အတူ ယှဉျတှဲ၍ပါရမီဖွညျ့ဆညျးလှူဒါနျးကွရအောငျ အားခဲ၍လာကွပါကုနျလော့။ ရတနာသုံးပါး အားထားကွညျညိုရနျ လာလှညျ့ကွပါကုနျလော့။
သရဏဂုံသီလ ခံယူဆောကျတညျရနျ လာကွပါကုနျလော့။ ပရိတျ မတ်ေတာဘာဝနာ ရိုသစှောနာကွားရနျ လာကွပါကုနျလော့။
သာသနာ့ အောငျဘိသိကျပှဲ ဆငျနှဲလှညျ့ကွပါကုနျလော့။ သာသနာ့အောငျစခနျး နိဗ်ဗာနျလမျး ဖှငျ့လှဈကွပါကုနျလော့။
အမြိုးဘာသာသာသနာ ဘယာဝေး၍ အေးစကွေောငျး ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သရနျ လာကွပါကုနျလော့။ ” ဟု တဈခေါကျ (သို့) သုံးခေါကျ ဖိတျကွားပါ။
အလှူဒါနအစီအစဉျ မနကျ အာရုံမတကျခငျ အိပျယာမှထ၍ မကျြနှာသဈ၊ ကိုယျလကျသနျ့စငျ၍ သနျ့ရှငျးသောအဝတျမြားလဲပွီးနောကျလှူဖှယျမြားပွငျဆငျပါ။ဆှမျး ရခေမျြးမှလှဲ၍ လှူဖှယျပစ်စညျးမြား ညကတညျးက ကွိုတငျ ခငျးထား ပွငျထားနိုငျပါသညျ။
ဖယောငျးတိုငျ လေးတိုငျကို ထှနျးပါ။ ပွီးတော့ မွတျဘုရားနဲ့ ရဟန်တာ အရှငျသူမွတျတှကေို ပငျဖိတျလြှောကျ ထားပါ။ ပွီးတော့ ဓာတျကွီးလေးပါးဆှမျးကို ရိုသစှော ဆကျကပျလှူဒါနျးပါ။
သီလဆောကျတညျပါ။ မတ်ေတာသုတျတျော၊ မဟာပဌာနျးအကယျြ၊ မဟာသမယသုတျတျော တို့ကိုရှတျဖတျပူဇျောပါ။ နောကျ မိမိတို့ မိသားစု ဖွဈခငျြတာတှကေို ထိုငျပွီး ကကြနြန ဆုတောငျးပါ။ ဖယောငျးတိုငျ မီးညိမျးရငျ စှနျ့လို့ရပါပွီ။
စှနျ့တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအတိုငျးစှနျ့လို့ မရဘူး။ စာရှကျ အဖွူတဈရှကျပျေါမှာ ကွီးလေးကွီးစမကို ပုံပါအတိုငျး ရေးပါ။ ပွီးရငျ မိမိ၏ အိမျရှေ့ ပွောငျပွောငျတှငျ ကွီးလေးကွီးရေးထားသော စာရှကျပျေါတှငျ စှနျ့ရမညျ။
စှနျ့သောအခါတှငျ ရေ ၁၂-ခှကျကိုလညျး ဘေးပတျပတျလညျတှငျ လောငျးခပြွီး စှနျ့ရမညျ။ ယပျ ၆-ခြောငျးကိုလညျး ဘေးတှငျ စိုကျထားရမညျ။ ပွီးရငျ မီးမှာ ကကျြစားသော သတ်တဝါ၊
လမှော ကကျြစားသော သတ်တဝါ၊ မွမှောကကျြစားသော သတ်တဝါ၊ ရမှော ကကျြစားသော သတ်တဝါမြား အားလုံး ဝလငျအောငျ သုံးဆောငျပွီး လိုရာအရပျကို သှားကွပါ။ ကြှနျုပျတို့ မိသားစုကိုလညျး စောငျ့ရှောကျကွပါလို့ ရှတျဆို၍ စှနျ့ရမညျ။
အကြိုးဖွဈထှနျးစတောကတော့ ကြှနျမတို့ရဲ့ နစေ့ဉျ လုပျဆောငျနတေဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို တိုးတကျအောငျမွငျစပေါတယျ။ ပွောစကားဆိုစကားကို အောငျမွငျစတေယျ။ စိတျနှလုံး ခမျြးမွပြေှ့ျောရှငျစတေယျေ။
ဒါကွောငျ့ ယတွာခခြွေငျးကို ဝါသနာပါ ယုံကွညျကွသူမြားအနနှေငျ့ မိမိတို့ မိသားစု စီးပှားရေး လုပျငနျးဆောငျတာမြား အောငျမွငျစရေနျအတှကျ ဤဓာတျကွီးလေးပါး ယတွာကို မကွာခဏ ဆောငျရှကျပေး နိုငျပါကွောငျး စတေနာကောငျးဖွငျ့ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
← မပုပ်မသိုးပဲ ယနေ့ အချိန်အထိရှိနေသော ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး (မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)
သွေးတိုးရောဂါကို လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နည်းလေးပါ →
သဲအင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏နောက်ဆုံးအချိန် ခန္ဓာဝန် မချခင် အဖြစ်အပျက်များ (ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဗဟုသုတပါ)
စပိုင်တွေ၊ အထူးလျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ရုပ်ရှင်ကားကောင်းများ